အဓိကကျသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဦးဆောင်ရာတွင် CEO တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ - Vanguard
CEO Role 956x620 copy
Home » အဓိကကျသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဦးဆောင်ရာတွင် CEO တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
အဓိကကျသော ပြောင်းလဲမှုများကို ဦးဆောင်ရာတွင် CEO တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
Posted by Vanguard on July 26, 2017 .
CEO တစ်ယောက်သည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော အဖွဲ့ အစည်းများဖွဲ့စည်းခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်ရာတွင် စံနမူနာအဖြစ် လည်းကောင်း စတဲ့ အရေးပါသောကဏ္ဍများကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လိုအပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ယနေ့ ခေတ်ရဲ့ စီးပွားရေးလောကမှာ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ရှိရန်နှင့် နေရာတည်မြဲဖို့ရန်အတွက် ပုံမှန်တိုးတက်နေရုံဖြင့် မလုံလောက်တော့ပဲ မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုအပ်ခြင်းကို အခါအားလျော်စွာ ကြုံတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ ပြောင်းလဲမှုများကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုသော မေးခွန်းများကို များပြားလှသော စာမျက်နှာ များတွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း၊ အရေးပါသောသူတစ်ယောက်၏ အခန်း ကဏ္ဍကို အနည်းငယ်သာ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ်။ CEO တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာတွေကို လုပ်သင့်သလဲ? CEO နှင့် Executive အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍဟာ ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်လာ ပါတယ်။
များစွာသော Executive များရဲ့ ဖြေဆိုထားသော အင်တာဗျူးများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကို အခြေခံကာ အောင်မြင်မှုအတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများ၊ စံနမူနာပုံစံများ မရှိတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် အရေးပါသော ကိစ္စအကြီး၊ အသေး အပေါ်မူတည်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင််ပုံ၊ ဖြစ်ပေါ် နေသော ပြောင်းလဲမှုပေါ်လိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အောင်မြင်မှုရှိခြင်းစသည့် အကြောင်း အရာများဟာ CEO တစ်ယောက်ကို လွှမ်းမိုးမှု ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပင် ပြောင်းလဲနေစေကာမူ၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်ကြာ လေ့လာထားခဲ့သော Research များနှင့် ကိုယ် တိုင်ကြံုတွေ့ခဲ့သော အတွေ့အကြံုများမှတစ်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတွင် အောင်မြင်သော CEO တစ်ယောက်မှာ ရှိနေသော အခန်းကဏ္ဍများကို အောက်ပါ အချက် (၄) ချက်ဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
အောင်မြင်လာအောင် CEO တစ်ယောက် အနေဖြင့် ကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးချင်စိတ်ရှိပြီး အခြား သူများကိုလည်း စွဲဆောင်နိုင်ကာ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည့်သူ ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်စရာတွေဟာ ယခင်ကထက်ပိုလာပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဟာ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်စရာ ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာလဲ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောတရားကို ပြန်လည် စဉ်း စားသုံးသပ်မှုများ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလိုအပ်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ ဘယ်ကရ နိုင်မလဲ။ ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကနေတဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ကုမ္ပဏီအပေါ်ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာကနေ ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာလည်း ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေ မလဲဆိုတာကိုလဲ ထင်သာမြင်သာရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စံနမူနာယူထိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အမူအကျင့်ကို တည်ဆောက်ပါ။
အောင်မြင်နေတဲ့ CEO တွေဟာ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းပဲ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ရတာကို ကြိုက် နှစ်သက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်၊ အပြုအမူများကို ကျင့်သုံးကျရန် အမြဲတမ်း အားပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဟုတ်သည် ဖြစ်စေ မဟုတ်သည် ဖြစ်စေ ၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ ကင်မရာရှေ့မှာရောက်နေသလို ပြုမူ ပြောဆိုတတ်ရမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတိုင်းအတွက် ထင်သာမြင်သာရှိနေခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်ခြင်း အတတ်ပညာ ဖြစ် တယ်လို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် Information Storage Equipment Business EMC ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Jospeh M. Tucci က ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အရည်အချင်းရှိပြီး သစ္စာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ထိပ်တန်းအဖွဲ့တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
CEO ရဲ့ အဖွဲ့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေကို ဦးဆောင်မှုပြုရာမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ လူတော်တွေလိုအပ်သလို အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်နိုင်မယ့် လူတွေလဲ လိုအပ်ပါတယ် လို့ Deutsche post’s ရဲ့ Chairman ဖြစ်သူ Zumwinkel က အကြံပြုထားပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ကဏ္ဍအလိုက် ဖော်ဆောင်မှုတွေကို မျှဝေပေးခြင်းဟာ အဆိုပါအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာမှာ အောင်မြင်မှု ရဖို့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ရရှိစေပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ပြောင်းလဲမှုတွင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ပိရမစ်ပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရလျှင် CEO တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပိရမစ်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးပိုင်းတွင်ရှိနေပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အခြားအဖွဲ့ဝင် များဟာ CEO မှတဆင့် လွှဲအပ်လာသော ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက် တွေ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ပါးစပ်နှင့်ပဲ ခိုင်းစေနေသော CEO များဟာလည်း ထိုကဲ့သို့ အလားတူ အမှန် တကယ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသော ဝန်ထမ်းများနဲ့သာ ကြုံတွေ့ရတက်ပါတယ်။ ထူးချွန်သော ခေါင်းဆောင် များကသာ ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အမှန်တကယ်သုံးစွဲရန်လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့လူများကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စည်းလုံးမှု ၊ စိတ်အားထက်သက်မှု ၊ ကတိတည်မှု ၊ မဆုတ်မနစ် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု စတာတွေဟာ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ဆောင်ရာမှာ အရေးပါခြင်းနှင့်အတူ CEO တစ်ယောက်အနေနဲ့ Company ပေါ်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမယ့် အစားထိုးမရတဲ့ အရည်အသွေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
#SAP #ERP #VanguardMyanmar #SAPBusinessOne #SAPMyanmar